Forex Market Outlook 2018 - Fihaonana ara-toekarena sy tsena lehibe
Contact Mila vonjy?
Market Outlook 2018: Fihaonam-be ara-toekarena sy tsena
Market Outlook 2018: Fihaonam-be ara-toekarena, fanadihadiana ara-politika sy fototra momba ny faritra
Inona ny mpivarotra FX afaka manantena ao amin'ny 2018? Ny FXCC dia manolotra anao amin'ny tatitra iray tena manan-danja ny hetsika ara-toekarena sy ny tsena rehetra tokony hajainao ho toy ny mpivarotra!
Miezaka mandroso amin'ny mety ho vanim-potoana mety hahatongavana amin'ny tsenan'ny 2018, dia asa tsy azo atao. Ny fivakisana ara-barotra miaraka amin'ny hery mystika ihany no afaka nieritreritra an'izany; ny DJIA dia hiakatra amin'ny manodidina ny 29%, ny NASDAQ amin'ny approx. 31% ary ny tahiry FAANG sasany hatramin'ny 50% amin'ny 2017. Firy amin'ireo mpandinika mpahay toekarena no afaka nanantena fa ny EUR / USD dia hivoatra amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny telo taona hatramin'ny Janoary 2018, na dia eo aza ny ejipsiana amin'ny fihenan'ny zandary amin'ny zero, raha ny avoakan'ny Fed dia avo telo heny amin'ny 1.5% amin'ny 2017?
Amin'ny maha-izy azy azy ireo, isika koa (en masse) dia tsy mahita ny Black Swan ara-toekarena lehibe eo amin'ny faravodilanitra, ohatra; Betsaka ny mpampiasa vola sy mpandalina izay nilaza mialoha ny fisian'ny fialana sasatra, na dia vitsy kokoa aza no nahazo tombony tamin'izany. Ankoatr'izay, nila filofosana vy ny investisseurs mba hijanonana amin'ny fampiasana vola mandritra ny famonoana, ary ireo izay manohitra ny rafitra dia tsy mahagaga akory fa ny fandoavam-bola azony, avy amin'ireo andrim-panjakana izay niadiany. Raha nirotsaka ny banky iraisam-pirenana andrefana sy ny rafitra ara-bola, dia nivonto ny fahatokisana sy ny bola.
Ny tanjontsika amin'ity tahirin-kevitra ity dia ny tsy haminavina izay hitranga ao amin'ny 2018, fa mba hahatonga ny mpanjifa hahatadidy ireo zava-mahatalanjona isan-karazany sy ireo loza izay mety ho tonga sakana amin'ny mety hahombiazantsika. Voarara ny alahelony ary omena fa ny ankamaroantsika dia mahay (na miezaka ho mahay) amin'ny fohy sy lava ao amin'ny tsenantsika, dia tokony tsy hatahotra isika amin'ny resaka fitsangatsanganana na fialantsiny lehibe; Mety hahatsapa ny paozin'ny forex, ny metaly sarobidy, na ny indices.
Tokony hanana (na hivoatra ihany koa) ny saina sy ny fahaiza-manao isika mba hahafahana manatona ny fanapahan-kevitra ara-barotra sy ny fampiasam-bola avy amin'ny fomba fijery tsy miandany, tsy misy fepetra, miaraka amin'ny dina mahatsiravina sy fisalasalana; Ny fametrahana ny glass anao 51% feno, amin'ny maha-optimisma azy, dia matetika no fomba tsara indrindra entina hanamboarana ny tsenam-barotra.
Raha ny fanadihadiana natao dia nizara ho an'ny sehatra maromaro io antontan-taratasy io ary avy eo ny fizarana ampahany, izay mifantoka indrindra amin'ny fandalinana ataonay eo amin'ireo toekarena lehibe indrindra: Eurozone, Etazonia, Royaume-Uni, Japon ary Shina.
Ny varotra sy ny fampiasam-bola dia mihisatra hatrany hatrany, ao amin'ny 2015 dia mbola miresaka momba ny fitotongan'ny Eurozone sy ny krizy ara-bola sy ara-tsosialy lalina i Gresy. Nandritra ny 2017, ireo olana goavana ireo dia toa nanjavona tao amin'ny radar'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Ny teny hoe "ho avy ny Troika", azo antoka fa ny fehezan-teny mampikorontan-tsaina izay mampihorohoro amin'ny fon'ny mponina grika maro, dia nanjavona tamin'ny dinika politika sy ara-bola.
Ny Eurozone sy ny Euro manokana dia toa tsy dia misy dikany loatra amin'ny hetsika ara-politika marobe izay nipoitra nandritra ny 2017; Brexit, fifidianana Frantsa Macron, Katalana, ny fifidianana alemana politika sy ny vokatr'izany, ny parlemanta Italiana dia ravan'ny filoha. Ireo olana goavana dia tsy nahatoky ny fahatokisan'ny mpiara-miombon'antoka ny Euro sy ny Indices Eoropeana, nandritra ny andro maromaro. Ho fitsapam-pandehanana any aloha, ny fahaverezan'ny vondrom-bahoakam-paritra manoloana ny mety hitranga mety hitranga, ireo ohatra ireo dia mety ho fitandremana.
FAMPIANARANA MOMBA NY MIRALENTA